. Tsy vao izao akory izahay no niatrika fifidianana ary tsy dadabenoely fa hampianatra ny olona handray andraikitra. Heverinay fa io fitaizana io dia nahomby tao anaty fanomananay izao fifidianana izao tao anatin’ny 5 taona. Izahay raha manao hetsika dia tsy nanao maimaimpoana, hoy hatrany ny tenany, fa niezaka nampandray anjara kely ny vahoaka hatrany mba hahafahan’izy ireo mahatsapa fa tena tompony amin’ny fampandrosoana nandraisany anjara izy. Ho ahy manokana dia mila antenimieram-pirenena matanjaka isika fa tsy ho voavidy vola intsony satria rehefa ny vola no manjaka dia lojika raha malemy ny fitondrana. Tsy manana antoko politika matanjaka isika ary tokony haverina ny hasin’ny antoko politika satria rehefa tsy voafehy ireo tsy miankina be dia be dia malemy ny fitondrana mijoro.